प्रभाव र स्वचालनमा | Martech Zone
आइतबार, जुलाई 9, 2006 शनिबार, अप्रिल 16, 2016 Douglas Karr
मा एक अध्याय द्वारा उत्सुक नग्न कुराकानीहरू, मैले आज मेरो ब्लगलाई पुन: प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरें। मैले यसलाई सरल रूपमा डग्लस ए कारर, डिजिटल र डाटाबेस मार्केटिंग भनेका थिए। तर वास्तवमै मैले को हुँ र मेरो ब्लग मार्फत पूरा गर्न कोशिस गरिरहेको छु भनेर धेरै कुरा भनेन। कसैले टाइप गरेको थियो फिडस्टर 'मार्केटिंग अटोमेसन', म निश्चित छु म सूचीमा कतै पनि हुने थिइनँ - यद्यपि यो मेरो उत्कटता हो।
मैले एकल क्याच वाक्यांश मात्र प्रयोग गर्ने प्रयास गरें तर फेला पार्न सकिन। को लामो बाउट्स पछि थिसौरस र dictionary जाँच गर्दै, मैले निर्णय गरे कि त्यहाँ २ सर्तहरू थिए जुन वास्तवमै यसको सारांश थियो ... प्रभाव र स्वचालन। मेरो विश्वास छ कि प्रभावी मार्केटिंग वास्तवमै यी २ सर्तहरूमा तल आउँछ। प्रभावकारी रूपमा बजार गर्न को लागी कसैलाई असर पार्नु पर्छ उत्पादन वा सेवा तपाईले बेच्दै हुनुहुन्छ। पूर्ण नभएसम्म चरणहरू हुँदै प्रक्रिया जारी राख्न स्वचालन भनेको माध्यम हो।
अखबारहरू, प्रत्यक्ष मेल, म्यागजिनहरू, टेलमार्केटिंग, वेब, ब्लग र ईमेल मार्केटिंग पहलहरूमा काम गरिसकेपछि, यो व्यक्तिसँगको कुराकानीलाई कायम राख्नको लागि हो। तिनीहरूको अगाडि एक विज्ञापन पुश गर्नुहोस् र उनीहरूको बारेमा बिर्सनुहोस्, र तपाईं बिक्री बन्द गर्ने सम्भावनाहरूलाई कम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईले लागिरहनु पर्छ, तर व्यक्तिको आवश्यकता वा चाहनाको सम्मान गर्नुहोस्।
बीस बर्ष पहिले, नौसेनामा भर्ना हुनु भन्दा पहिले मैले होम डिपोमा काम गरें। यो गाह्रो काम थियो। फोनिक्स, एरिजोनामा म ग्राहकको कार र ट्रकहरू लोड गर्दै थिएँ। तर म त्यहाँ मार्केटिंग मा मेरो पहिलो पाठ म कहिल्यै भुल्ने छैन। ब्यवस्थापकहरूले सबै कर्मचारीहरूलाई उनीहरू कुन परियोजनामा ​​काम गरिरहेका छन् भनेर सोध्न प्रोत्साहित गरे। यो सोध्नु भन्दा फरक छ, "के म तिमीलाई मद्दत गर्न सक्छु?"। त्यसका लागि, सरल जवाफ "होईन"। जहाँसम्म, जब उनीहरूले कुन परियोजनामा ​​काम गरिरहेको छ भनेर सोधे, प्रायः ग्राहकहरूले स्टाफसँग उनीहरूले के गर्न खोजिरहेका थिए भन्ने कुराको लागि ठूलो कुराकानी सुरु गरे। यो खुशी खुशी ग्राहकहरु को लागी र बिक्री बन्द भयो।
वेब जस्ता माध्यम मार्फत, यो अझै एक कुराकानी हो जुन हामीले हाम्रो ग्राहकहरूसँग सुरू गर्न प्रयास गरिरहेका छौं। त्यहाँ केही राम्रो इमेजरीको साथ त्यहाँ एक वेबसाइट राख्नु भनेको तपाईंको स्टोर बाहिर फेन्सी साइन भएको जस्तै हो। तर यसले कहिल्यै राम्रो हेन्डशेक र नमस्तेको ठाउँ लिने छैन।
इन्ट्रासिव विज्ञापन मोडेल अझै पनी जारी छ। विज्ञापन जताततै टाँसिनुहोस् र कसैले पनि एक देख्न सक्छ र केहि खरीद गर्न सक्छ। जे होस्, इन्टरनेट ले तपाईंको संभावनाहरू र ग्राहकहरूसँग कुराकानीको लागि उत्तम माध्यम ल्याउँछ। ब्लगहरू, आरएसएस, ईमेल, फारमहरू, वेब फोरमहरू, र खोज सबै अन्तरक्रियात्मक मार्केटिंग प्रयासहरू छन्। तपाईं अधिक तपाईंको टाई मार्केटिंग को प्रयास मा टाई र स्वचालित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईं र तपाईंको संभावना बीच कुराकानी राम्रो, र राम्रो तपाईंको व्यापार समृद्धि हुनेछ।
यो सबै प्रभाव र स्वचालनको बारेमा छ। मलाई आशा छ तपाइँ नयाँ शीर्षक मनपराउनुहुन्छ!
टैग: स्वचालनdouglas karrप्रभावप्रभाव र auotmation मारबर्ट स्कबलशेल इजरायल